Air Madagascar Izay vao tena ho faty
Nampihetsi-po ireo tonga nanamarika ny fankalazana ny fetin�ny mpiasa teny Alarobia omaly ny fanazavana nentin-dRabarilala Rado sy ireo namany ny amin�ny fanaovana z�inona ny zon�izy ireo sy ny fiheveran�ny mpitantana ny Air Madagascar ny tenany ho ambonin�ny lal�na. Niady ny amin�ny tsy hanaovana tantely afa-drakotra ny toeram-piasany sy ho fiarovana ity harem-pirenena ity no nahatonga an-dry Rabarilala Rado nitarika fitokonana tao amin�ny Air Madagascar. Voaporofo ankehitriny ny finiavana te hamotika ity orinasa ity mba ahafahana mivarotra azy amin�ny vidiny mora fa izay fisintahan�ny fanjakana amin�ny fitantanana izay rahateo no tanjona ka eo am-panaovana ny sonian�ny fifampivarotana vao tena hiseho ireo mpaka tombontsoa na ny ao anaty fitondrana na ny ivelany. Alohan�ny hamarotan�izy ireo ny Air Madagascar anefa, izay tetika efa natsidiky ny minisitry ny Fizahantany Ratsiraka Roland ny faran�ny herinandro teo, dia fantatra ankehitriny fa efa lasan�olon-tsotra ny orinasa iray izay nitambatra tamin�ny Air Madagascar izay nikarakara ny Handling eny Ivato. Fantatr�ireo mpitantana tao amin�ny Air Mad teo aloha mantsy fa io sampan�asa io dia mampiditra vola foana na dia tsy misy tombony intsony aza ny asa fitaterana ataon�ny Air Mad, ka dia any indray izy ireo no nifandrombaka. Tsy re be tsy re kely ny momba ny nisintahan�ny fanjakana tamin�ity fitantanana ny �Handling� ity fa izy efa eny an-tanan�olona vao tena fantatra. Ny mpiasa tao amin�ny Air Mad fahiny ihany anefa no nosintonin�ny mpitanana vaovao ho ao aminy indray. Mahatsikaiky ny zava-miseho fa lazaina fa maty antoka ny Air Mad noho ny fahasarotan�ny fifaninanana saingy ny orinasam-pitaterana ana habakabaka hafa na eto Madagasikara na ny atsy Maorisy sy La R�union anefa miroborobo. Atsy amin�ny nosy Kaomoro aza ankehitriny efa ahitana kompania tsy miankina roa dia ny AB Aviations sy ny Inter- �les. Izany ve no fomba firoboroboan�ny asa fitaterana ana habakabaka aty amin�ny faritry ny ranomasimbe Indiana dia mahasahy milaza ny mpitantana ny Air Mad fa tsy mandeha ny tsena. Sao dia diso taranja ?
Na inon-kidona na ho inon-kihatra dia tsy hiverin-dalana amin�ny izay heveriny ho fampihavanam-pirenena ireo filoham-piangonana mivondrona ao amin�ny Fiombonan�ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara.
Tsy mitsahatra ny mamingana sy manaratsy an�i Dada na ny fitondrana na ireo tetezamitatra mpankahala.
Tsy nisy nanome baiko amin�ny fanakanana an�i Marc Ravalomanana hiseho vahoaka na hikabary, hono.
Miverina indray ny fampiasana ny herim-pamoretana, hifehezana ny tsy mitovy hevitra amin�ny tena
Hovana indray, hono, ny endriky ny vola 10.000 Ar izay nanomboka tamin�ny 2003.
Horaisin�ny mpandraharaha vahiny mandritra ny 10 taona ny toby anankiroa fanodinana jiro fananan�ny Jirama.
Ny tiana ampitaina, hoy izy dia 60 taona izao isika no niaina tanaty repoblika. Ahoana ny fivoaran’ny fampandrosoana sy ny fampianarana ? Mitombo ny be diplaoma fa mihena ny kalitaom-panabeazana. Midika izany, hoy ity profesora ity, fa mila fanorenana koa io sehatra io. Tokony homena vahana ny votoatin-javatra. Avahana tsara fa ny diplaoma Doctorat dia natao ho an’ireo mpampianatra mpikaroka fa ny hatreo amin’ny Bacc +5 kosa dia natao ho an’ireo tokony hisokatra amina sehatra maro. Io lafiny fisokafana io, hoy ity tomponandraikitra ity no tsy ampy amin’ny tanora eto ary izay no himasoanay sy soso-kevitra nomanay ny fanjakana hatramin’izay. Ny filoham-pirenena amerikanina, Barack Obama, hoy izy, dia tsy manana Doctorat. Soso-kevitray amin’ny mpitondra fanjakana, hoy izy, dia mba aoka ireo avara-pianarana manana hatreo amin’ny bacc+5 no tena ezahana izay hivelarany sy hisokafany amina zavatra hafa ankoatry ny fahaizany manokana na “spécialité”. Miisa 99 mianadahy moa ireo mpianatra navoakan’ity oniversite ity omaly ary isan’ny mari-pahaizana manokan’izy ireo ny resaka fanajariana ny tany sy ny haitarika. Isan’ny reharehan’ny ity oniversite ity kosa ny filoha mpanorina ny vondron’orinasa Mada Jeune, Lahatra Andriamahatsangy.